१ सय बढी विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको महिलाको दावी – राजधानी खबर
१ सय बढी विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको महिलाको दावी
बेलायतकी एक जना पूर्व मोडल तथा विधवा महिलाले आफूले १ सय जना विवाहित पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेको दावी गरेकी छन् ।
पेसाले फाइनान्सियल कन्सल्टेन्ट ग्वेनेथ लीले आफूले कयौ श्रीमानलाई खुसी बनाएर उनीहरुको वैवाहिक जीवन बचाएको दावी गरेकी हुन् । उनले यति धेरै विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध राखेकोमा कुनै पश्चाताप नरहेको बताएकी छन ।
धनवान महिलाले भनिन् कि जुन पुरुषसँग उनले सम्बन्ध कायम गरिन् उनीहरुमध्ये करिब आधा पुरुषका श्रीमतीलाई समेत थाहा थियो कि श्रीमानले चिट गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको यौन जीवन राम्रो थिएन र यही कारणबाट श्रीमतिहरुले श्रीमानको अफेयरलाई नजरअन्दाज गरे । महिला लण्डनको एउटा पाँश कोलनी चेलसियामा बस्छिन् । उनले भनिन्–म इमान्दारिताका साथ स्वीकार गर्दछु कि मैले कयौ जोडीको सम्बन्ध टुट्नबाट बचाएकी छु ।
ग्वेनेथले भनिन–कयौ महिलाका लागि सेक्स दैनिक रुटिनका रुपमा अन्त्य हुने गर्दछ । ती महिलाहरु साथी र सन्तानका साथ खुसी रहन्छन् । तर, यसबाट पुरुष सेक्सका लागि बेचैन रहन्छन् । उनीहरु आफ्नी श्रीमतीलाई छोडन चाहँदैनन् तर फ्रस्टेशन पनि अन्त्य गर्न चाहन्छन् । उनका अनुसार उनी मात्र पुरुषका साथ रमाइलो चाहन्छिन् । उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा पुरुषहरु सेक्स चाहँदैनन्, यस्तोमा धेरै महिलाहरु नयाँ अफेयरबाट स्वयमलाई खुसी राख्छन् र उनीहरुका श्रीमान इमान्दार बनिरहन्छन् । यो पनि ठिकै हो ।
लीका अनुसार उनले अधिकांश विवाहित पुरुषलाई IllicitEncounters.com को माध्यमबाट भेटेकी हुन् । यो बेलायतको प्रमुख डेटिङ वेभसाइट हो, जसले विवाहित महिला पुरुषलाई भेट गराइदिने गर्दछ । करिब १० वर्ष पहिला उनको श्रीमान रोबर्टको निधन भएको थियो। त्यतिबेलाबाटै उनले यो वेभसाइटमा एकाउन्ट खोलेकी थिइन् । उनका लभर्समा कयौ फाइनान्सर, विजनेश टाइकुन र ठुला चिकित्सक संलग्न छन्। एजेन्सी
यसरी हुन्छ जाडोमा जोडीहरुको मस्ती, अझ यसरी बढाउन सकिन्छ
December 31, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on तपाईलाई थाहा छ ? महिला र पुरुषको सर्टमा टाँक ठिक विपरीत किन हुन्छ ?
लण्डनको वर्षकै सबैभन्दा नशालु पार्टी, यसरी पोखियो युवतीहरुको जवानी
December 24, 2017 दिनेश कुमार बस्नेत Comments Off on लण्डनको वर्षकै सबैभन्दा नशालु पार्टी, यसरी पोखियो युवतीहरुको जवानी
शेर्पा महिला पत्रकार आरोहणको पत्रकार सम्मेलन
सुर्खेतमा किशोरी आमाहरु बढ्दै, ज्यान जोखिममा, किन बढिरहेछन् किशोरी आमा?
राजधानीको सडक यसरी पिच गरिँदो रहेछ र पो तीन महिना पनि टिक्दैन रहेछ